Ny fady na faly, eo amin’ny kolontsaina malagasy, dia ireo zavatra raràna tsy azo tanterahina araka ny fepetra napetraky ny fomba amam-panao. Mety hisy fady momba azy ny olona na ny toerana na ny asa atao na ny zavatra iray ka miovaova isam-paritra eto Madagasikara izany. Araka ny finoana dia vokatry ny hery tsy hita maso sady mifandray amin’ny fivavahana amin'ny razana ny fady. Na dia misy ny fady iraisan'ny Malagasy rehetra dia misy ny fady tsy mahakasika afa-tsy ny faritra na ny tanàna na ny fianakaviana sasany ihany. Isan’ny maha malagasy ny Malagasy ny fananana fady sady mandray anjara amin’ny fiforonan’ny fiarahamonina sy ny maha izy ny tena. Ny fady fahita matetika dia momba ny fonondroana amin’ny fanondro ny fasana, ny fihinanan’ny vehivavy bevohoka amalona.
Misy fady mipoitra hatrany hatrany. Rehefa misy zavatra vaovao atomboka dia tsy maitsy manao joro (fanatitra) mba hanalana ny fady. Izay manota fady dia heverina ho maloto sy manohintohina ny filaminana ara-panahin'ny fiarahamonina, na tanteraka ny fanotam-pady na tsy tanteraka. Ny vahiny avy any ivelan’ny Madagasikara dia asaina koa mba hanaja ny fady isan-toerana sady hanova ny fitondrany ny fiainany hifanatraka amin’izany.
Hita taratra amin'ny lafin-javatra momba ny kolontsaina malagasy ny fady. Izany no andrenasana ny Malagasy manao hoe "aza fady".
Ny mpanoratra sasany milaza fa ny fady dia mitovy amin'ny zavatra andraràna nefa tsy voasoratra ao amin’ny kolontsaina tandrefana, izay miteraka tsy firaharahan’ny fiarahamonina ilay mpandika lalàna.
Ny teny hoe fady na faly dia avy amin'ny teny daiaka (fiteny aostroneziana) hoe pali.
Fady momba ny fifandraisan'ny olona samy olona
Fady arakaraka ny sokajin'olona
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fady_(malagasy)&oldid=997958"
Voaova farany tamin'ny 10 Oktobra 2020 amin'ny 20:04 ity pejy ity.